Warshadda Qurxinta Q-beddeshay - Shiinaha Q-beddelay Soosaarayaasha Crystals, Alaab-qeybiyeyaal
Si loo caawiyo naqshadeynta istiraatiijiyad adag oo la isku halleyn karo oo laser ah, 'DIEN TECH' waxay bixisaa taxane ah kiristaalo beddelaya Q-beddelaad ah si ay ula jaan qaadaan nidaamyada, oo ay ku jiraan Co2 +: MgAl2O4 (Co: Spinel), oo sii daaya laga bilaabo 1.2 illaa 1.6μm, gaar ahaan, isha -safe 1.54μm Er: laser galaas, laakiin sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa 1.44μm iyo 1.34μm leerarka dhererka.Cr4 +: YAG, kuwaas oo ah waxyaabaha ugu fiican ee Nd: YAG iyo laser kale Nd iyo Yb doped laser oo ku jira qiyaasta dhererka 0.8 ilaa 1.2um. Waa xasillooni iyo kalsooni sarreysa, nolosha adeegga dheer iyo marinka burburka sare.
KD * P EO Q-Beddel
EO Q Switch wuxuu bedelayaa xaalada kala qaybsanaanta iftiinka ee dhex mara marka koronto la adeegsado ay keento isbadal ku yimaada isbadalka ku yimid koronto koronto sida KD * P. Markii loo isticmaalo wadajirka polarizers, unugyadan waxay u shaqeyn karaan sidii shidmayaasha indhaha, ama laser-ka Q-furayaasha
RTP (Rubidium Titanyle Phosphate - RbTiOPO4) waa shey hada si balaaran loogu isticmaalo codsiyada Electro Optical markasta oo loo baahdo danab hoose oo badala.
LiNbO3 Crystal wuxuu leeyahay aalad elektro-optical, piezoelectric, photoelastic iyo guryaha indhaha oo aan toos ahayn. Iyagu waa xoog badan yihiin. Waxaa loo isticmaalaa labanlaab isku dheelitirnaanta, optics-ka aan tooska ahayn, unugyada Pockels, muraayadaha oscillators indhaha, qalabka Q-beddelka ee leysarka, acousto-opticdevices kale, qalabka muraayadaha indhaha ee gigahertz frequencies, iwm.
Wareegyada Q-badalashada ama nuugayayaasha laqanqin kara waxay dhaliyaan unugyo awood sare leh oo laser ah iyadoo aan la isticmaalin qalabka elektaroonigga ah ee loo yaqaan 'Q-switches', taasoo markaa yareyneysa baakadka baakadka iyo baabi'inta korantada sare ee korantada. Co2+: MgAl2O4 waa shey ugub ah oo loogu talagalay qunyar-socodka Q-beddelka lasers-ka soo baxaya 1.2 illaa 1.6μm, gaar ahaan, indhaha-nabdoon ee 1.54μm Er: leysarka dhalada, laakiin sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa dhererka leyska 1.44μm iyo 1.34μm. Spinel waa muraayad adag oo xasilloon oo si wanaagsan u dhalaalaysa.
Cr4 +: YAG waa qalab ku habboon beddelka Q-beddelka Nd: YAG iyo laydh kale oo Nd iyo Yb ah oo dhererkoodu kala duwan yahay oo dhererkiisu yahay 0.8 ilaa 1.2um.Waa xasillooni ka sarreysa iyo isku halaynta, nolosha muddada dheer iyo marinka dhaawacyada badan.